Hướng dẫn viết mẫu giấy mời họp, mẫu thư mời họp chuẩn nhất | Anybook.vn - Anybook
Đang Đọc: Hướng dẫn viết mẫu giấy mời họp, mẫu thư mời họp chuẩn nhất | Anybook.vn in Anybook.vn
Ny fanasana fivoriana dia manana andraikitra lehibe, ampiasaina amin’ny fanasana olona amin’ny hetsika amin’ny fivoriana, ny votoatin’ny fanasana fivoriana dia ny filazana ny fotoana, ny toerana, ny mpanasa miaraka amin’ny soso-kevitra, ny fangatahana.
Ao amin’ny lahatsoratra etsy ambany, 123job dia hampahafantatra ny mpamaky ny hevitra môdely fanasana fivoriana inona no tokony hatao, toro-hevitra amin’ny fanoratana lasitra fanasana tsara tarehy, misintona ny lasitra fanasana fivorian’ny ray aman-dreny sy ireo lasitra fanasana fivoriana hafa. Araho ny lahatsoratra etsy ambany!
1 I. Inona no atao hoe fanasana fivoriana?
2 II. Inona no tanjon’ny taratasy fanasana fivoriana?
3 III. Zavatra tokony hampidirina ao amin’ny fanasana fivoriana
4 IV. Ahoana ny fanoratana taratasy fanasana fivoriana tsara indrindra, taratasy fanasana fivoriana
5 V. Taratasy paosy rehefa manoratra fanasana fivoriana
5.1 1. Tsy maintsy soratana mazava tsara ny mombamomba ny mpanasa fivoriana
5.2 2. Famintinana feno ny votoatin’ny fivoriana
5.3 3. Fotoana sy toerana hanaovana ny fivoriana
5.4 4. Tandremo ny fizarana soso-kevitra
6 SATRIA. Ny maodely fanasana fivoriana farany, fanasana fivoriana amin’ny 2020
6.1 1. Môdely fanasana amin’ny fivorian’ny kilasy
6.2 2. Môdely fanasana ao amin’ny orinasa
6.3 3. Môdely fanasana amin’ny fivorian’ny ray aman-dreny
6.4 4. Môdely fanasana fivoriana fanao isan-taona
6.5 5. Santionany taratasy fanasana fivoriana amin’ny teny anglisy
I. Inona no atao hoe fanasana fivoriana?
Ny lasitra fanasana fivoriana dia iray amin’ireo endrika entina manambara ny fotoana sy ny toerana hanaovana ny fivoriana ary maneho ny maha matihanina sy ny fanajana ny olona nasaina. Raha ny marina dia tsy maintsy manatrika ny lanonana na fivoriana izay rehetra mahazo fanasana fivoriana satria io zavatra io no anisan’ny zava-dehibe amin’ny sampana, masoivoho ary ny asa sahanin’ity tanjona ity.Mitana anjara toerana lehibe koa ny fanekena, ka tsy maintsy ilaina izany. amin’ny fivoriana. Mandritra ny fivoriana dia ilaina ihany koa ny fananana hevitra sy fanambarana momba io tanjona io momba ny fanovana fanapahan-kevitra sy ny politika vaovao mifandraika amin’ny vondrona sy ny masoivoho.
Modely fanasana tsara tarehy
Fanasana fivoriana fantatra ihany koa amin’ny orinasa maro manana anarana hafa dia fanasana fivoriana, dia be mpampiasa ankehitriny ary tena malaza amin’ny vondrona sy ny orinasa, indrindra fa ny sampan-draharaham-panjakana. Matetika novolavolain’ny Departemantan’ny HR na mampiasa modely efa vita ankatoavin’ny Tale.
Na inona na inona votoatin’ny fivoriana, ny famoronana fanasana fivoriana dia tokony ho matotra mba hiantohana ny toetry ny fivoriana. Etsy an-danin’izany, rehefa te hanasa olona ho any amin’ny fivoriana amin’ny alalan’ny fanasana fivoriana ianao, dia ilaina koa ny mahafeno ny votoatiny fototra mifandray amin’ny hevi-dehibe ao amin’ilay fivoriana mba ho azon’ny mpanatrika mazava tsara.
II. Inona no tanjon’ny taratasy fanasana fivoriana?
– Asa tsy tapaka ny taratasy fanasana fivoriana, tena ilaina amin’ny fiainana, any am-piasana, olona maro, orinasa na fikambanana no liana. SAINGY fanasana fivoriana Ahoana no mbola hiantohana ny votoaty ho ampitaina mba ho hitan’ny mpanasa fivoriana ny fanajan’ny fanasana azy.
– Ao amin’ny fikambanana faobe, orinasa hamaha olana iray na mila ny hevitry ny mpikambana, dia matetika izy ireo manokatra fivoriana. Ao amin’ny fivoriana no hitondran’izy ireo olana sy votoaty tokony hodinihina, ary avy eo dia hampiakatra ny heviny manokana ireo mpikambana ary avy eo dia hitondra vahaolana farany hamahana izany votoaty izany.
READ Hồi 3 | Tam quốc diễn nghĩa | La Quán Trung | Anybook.vn
– Raha hitarika fivoriana, ny dingana voalohany ataon’ny mpikarakara dia ny manomana sy ny votoatin’ny fivoriana. Matetika any amin’ny sampan-draharaha sy orinasa madinika, rehefa mitarika fivoriana, dia afaka manambara, na manasa, ny fivoriana am-bava, amin’ny alalan’ny kahie. Na izany aza, ho an’ny masoivoho, fikambanana na orinasa sy orinasa lehibe be olona. Ny fivoriana dia tsy maintsy asaina amin’ny alalan’ny fanasana na taratasy fanasana. Azo alefa mivantana any amin’ny mpanatrika fivoriana izy ireny na azo alefa amin’ny paositra, na amin’ny alalan’ny paositra an-tserasera mihitsy aza.
III. Zavatra tokony hampidirina ao amin’ny fanasana fivoriana
Miaraka amin’ireo endri-javatra manan-danja ao amin’ny môdely fanasana fivoriana etsy ambony, dia tsy maintsy fantatrao amin’ny ampahany ny tokony hanoratana ny môdely fanasana fivoriana sy ny votoatiny sy ny tanjona. Ny maodely fanasana fivoriana dia ampiasaina amin’ny toe-javatra maro eo amin’ny fiainana andavan’andro, izany no antony ahitanao ny taratasy na ny maodely fanasana fivoriana toy ny: Môdely fanasana fivoriana ray aman-dreny, môdely fanasana fihaonambe, môdely taratasy fanasana fihaonambe, môdely fanasana fety, môdely fanasana fivoriana, môdely fanasana fety. ary môdely fanasana asa. Ny fomba fanoratana taratasy fanasana tsara sy ny môdely fanasana tsara tarehy dia fanontaniana apetraky ny olona maro, koa andeha hojerentsika ireo modely fanasana etsy ambony mba hisafidianana sy hampiasaina amin’ny fomba mety indrindra.
Tsotra sy fohy ny votoatin’ny taratasy fanasana fivoriana, ahitana ny anaran’ny masoivoho voasoratra eo amin’ny zoro havia, ny lohatenin’ny firenena sy ny teny filamatra eo ankavanana, ary ny lohatenin’ny fanasana dia tsy maintsy soratana amin’ny litera lehibe misy tsindrim-peo. Ny vontoatin’ny fanasana fivoriana dia atolotra amin’ny vahiny, soraty ny anaranao feno, inona ny fivoriana tokony hatrehana, ny toerana sy ny fotoana voafaritra, ny anton’ny fivoriana na ny olana izay hapetraka mandritra ny fivoriana.fivoriana ary farany ny sonian’ny lehiben’ny masoivoho. Noho izany, nahavita ny maodely fanasana haingana indrindra izahay, ankoatra izany, misy modely fanasana maro hafa miankina amin’ny filan’ny masoivoho sy fikambanana tsirairay izay manana modely fanasana samihafa. Noho izany, andao hianatra bebe kokoa momba ny fisafidianana ny môdely fanasana mety hampiasaina.
Tsy ny maodely fanasana fivoriana ihany no misy, fa misy koa modely na endrika hafa, na antontan-taratasy azonao ampiasaina. Andeha hojerentsika bebe kokoa ao amin’ny 123job.vn raha mila fanazavana fanampiny, na raha olona sahirana ianao dia afaka misintona mivantana ireo taratasy ireo maimaim-poana amin’ny fampiasana haingana sy mora indrindra.
Rehefa manasa zavatra iray handray anjara amin’ny fivorian’ny sampan-draharaham-panjakana na orinasa tsy miankina ianao, dia mila mamaritra mazava tsara hoe inona ny mpanatrika nasaina, ny teny ao amin’ny fanasana dia tokony ho ara-dalàna, fa tsy manahirana, Ny mpamaky dia tsy maintsy mahatakatra izay manasa azy ireo. amin’ny fivoriana momba ny, ary indrindra indrindra, ny fotoana sy ny toerana hanaovana ny fivoriana.
IV. Ahoana ny fanoratana taratasy fanasana fivoriana tsara indrindra, taratasy fanasana fivoriana
Rehefa manoratra fanasana fivoriana na fanasana fivoriana ary mandefa izany amin’ny mpihaino tsirairay. Ny olona manoratra ny taratasy fanasana, ny taratasy fanasana dia mila mamaritra hoe iza ireo mpikambana sy mpandray anjara amin’ny fivoriana. Avy eo dia misy fanasana mirentirenty, mifanentana amin’ny mpihaino tsirairay.
READ Download top 15 mẫu giấy xác nhận phổ biến nhất hiện nay | Anybook.vn
Rehefa manoratra fanasana fivoriana, fanasana fivoriana, ny iray amin’ireo teboka tokony homarihina dia ny hoe ny votoatin’ny fanasana fivoriana sy ny taratasy fanasana fivoriana dia tokony ho fohy, tanjona ary marina amin’ny fifantohana mba hisorohana ny fikorontanana sy ny lava.
Ny votoatiny manan-danja amin’ny fanasana fivoriana, ny taratasy fanasana fivoriana dia ahitana ireto votoaty manaraka ireto:
– Sampan-draharaha, fikambanana na olona nasaina. Amin’ity votoaty ity, ny mpanoratra dia mila milaza mazava tsara ny fampahalalana feno momba ny masoivoho, fikambanana na olona nasaina. Ohatra, raha misy fanasana manokana dia tsy maintsy ambara mazava tsara ny anarana feno sy ny anaram-boninahitry ny olona nasaina: Atoa Nguyen Van A, toerana: tale teknika.
Famintinana ny votoatin’ny fivoriana: Amin’ny fanasana fivoriana na fanasana fivoriana dia tena zava-dehibe ny votoatiny. Rehefa mamaky ny votoatin’ny fivoriana ireo nasaina dia ho fantany fa tsy maintsy manomana ny votoatiny sy ny firaketana ary ny antontan-taratasy ho an’io fivoriana io izy ireo. Marihina anefa fa rehefa manoratra ny votoatin’ny fivoriana dia famintinana fohy momba ny votoatin’ny fivoriana ihany no ampy ho an’ny mpamaky mba hahatakaran’ny mpamaky ny votoatin’ny fivoriana, hialana amin’ny teny mirohondrohona sy lava izay miteraka fisafotofotoana ho an’ny mpamaky.
– Fotoana sy toerana: Araka ny nodinihina etsy ambony mba hanomanana ny fivoriana dia tsy maintsy manomana ny fanomanana ny fivoriana ny mpikarakara fivoriana. Ity drafitra ity dia tsy maintsy ahitana drafitra momba ny toerana sy ny fotoana hanaovana ny fivoriana. Aorian’ny fandrindrana ny fivoriana sy ny fanoratana fanasana sy fanasana ho an’ireo mpandray anjara, ny fotoana sy ny toerana hanaovana ny fivoriana dia ampahany manan-danja amin’ny votoatin’ny fanasana tsirairay.
V. Taratasy paosy rehefa manoratra fanasana fivoriana
1. Tsy maintsy soratana mazava tsara ny mombamomba ny mpanasa fivoriana
Ao amin’ny taratasy fanasana fivoriana, ny mpanoratra dia mila milaza mazava tsara ny anarana feno sy ny anarana fenon’ny solontena manasa ny fivoriana; miaraka amin’ny nomeraon-telefaonina, toerana… mba hahafantaran’ilay mandray ny fanasana fivoriana mazava tsara hoe iza no nanasa azy hivory. Ary ny nomeraon-telefaonina dia mba ahafahan’ny olona mifandray amin’ny toe-javatra maika mifandray amin’ny fidirana amin’ny fivoriana.
2. Famintinana feno ny votoatin’ny fivoriana
Amin’ny andraikitry ny solontenan’ny mpanasa fivoriana, ny mpanoratra dia tsy maintsy tompon’andraikitra amin’ny famenoana ny vaovao momba ny tanjon’ny fivoriana; Na dia ilaina aza ny manoratra fohy momba ny andalana 1-2, dia mbola ilaina ny manoratra mba hahafantaran’ilay olona nasaina ny votoatiny fototra alohan’ny hidirana amin’ny fivoriana.
3. Fotoana sy toerana hanaovana ny fivoriana
Angamba ity no iray amin’ireo votoaty tena ilaina amin’ny maodely fanasana fivoriana rehetra, ny mpanoratra dia mila manome araka izay azo atao araka izay azo atao momba ity atiny ity. Eo am-panomezana antoka fa hanatevin-daharana ny fivoriana ara-potoana, amin’ny fotoana mahamety azy, dia maneho ny maha matihanina ihany koa izany. Ary matetika dia mandefa fanasana fivoriana 1 herinandro mialoha ny fotoam-pivoriana ny masoivoho mba hahafahan’ireo olona nasaina mandamina ny fandaharam-potoana iasany handray anjara amin’ny fivoriana amim-pilaminana sy feno.
4. Tandremo ny fizarana soso-kevitra
Isaky ny môdely fanasana fivoriana dia matetika no tsy maintsy manoratra ny soso-kevitra ihany ny mpanoratra, saingy mbola misy tranga manokana vitsivitsy tokony homarihina ho an’ilay olona nasaina hanatrika ny fivoriana, izay mila omanina (akanjo, fampisehoana mozika, sns. ); kabary…).
READ Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu | Anybook.vn
SATRIA. Ny maodely fanasana fivoriana farany, fanasana fivoriana amin’ny 2020
1. Môdely fanasana amin’ny fivorian’ny kilasy
Môdely fanasana fivorian’ny kilasy
2. Môdely fanasana ao amin’ny orinasa
Taratasy fanasana santionany amin’ny fivoriana ao amin’ny orinasa
(1) Anaran’ny masoivoho na fikambanana mitantana mivantana (raha misy).
(2) Anaran’ny masoivoho na fikambanana mamoaka ny fanasana
(3) Fanafohezana ny anaran’ny tompon’andraikitra na fikambanana mamoaka ny fanasana.
(5) Esory ny fangatahana votoatin’ny fivoriana.
(6) Anaran’ny masoivoho, fikambanana na anarana feno, asa, vondron’ny mpanoratra ny olona nasaina.
(7) Anaran’ny fivoriana, fihaonambe, seminera…
(8) Fanafohezana ny anaran’ny vondrona mpanonta sy ny isan’ny dika mitovy.
(9) Mpizara famantarana, fitaratra ary isan’ny famoahana (raha ilaina).
3. Môdely fanasana amin’ny fivorian’ny ray aman-dreny
Ity ny maodely fanasana fivoriana fanaon’ny ray aman-dreny mahazatra indrindra
Môdely fanasana fivorian’ny ray aman-dreny
4. Môdely fanasana fivoriana fanao isan-taona
Modely fanasana fivoriana fanao isan-taona
5. Santionany taratasy fanasana fivoriana amin’ny teny anglisy
Reference form 1: Ho an’ny fivoriana anatiny
Ry mpiara-miasa malala,
Manao ahoana ianao androany? Manantena aho fa mandeha tsara ianao. Manoratra aminao aho androany hanasa anao amin’ny fivoriana izay tiako horesahina amin’ny olana sasantsasany amin’ny orinasanay izay mila vahana.
Ny fihaonana dia hatao amin’ny [date, time] ary in [place]. Manantena ny hahita anareo rehetra any aho.
Manao ahoana ny andronao? Manantena aho fa mandeha tsara ny zava-drehetra. Manoratra ireto andalana ireto aho mba hanasa anao amim-panajana amin’ny fivoriana hiresahana momba ny olana sasany amin’ny orinasa izay tokony hovahana.
Ny fihaonana dia hatao amin’ny [địa điểm] ary at [giờ, ngày tháng]. Manantena ny hahita anareo rehetra any aho.
Reference form 2: Ho an’ny fihaonana amin’ny mpiara-miasa
Ny anarako dia [Your name?] ary mifandray aminao aho amin’ny anaran’ny [Office name]izay [describe company activities].
Te hangataka fihaonana amin’ny tompon’andraikitra aho [management/marketing department…] mifanakalo hevitra [topics].
Satria azo atao ny fandaharam-potoanako amin’ny andro rehetra amin’ity herinandro ity, afaka manatrika ny fivoriana aho noho ny fangatahanao. Na izany aza, tena mankasitraka ny hatsaram-panahinao aho raha afaka mandamina fivoriana eo anelanelan’izy ireo [date and time A] SY [date and time B] ho fanomanana tsara kokoa/fanarahana ny fivoriana. Azo alaina ao amin’ny [your telephone number] raha manana fanontaniana ny mpiasanao.
Misaotra betsaka tamin’ny fotoananao/ora. Tsy andriko ny hihaino ny orinasanao.
Ny anarako dia [tên của bạn] ary misolo tena aho [Tên công ty]miasa momba ny [mô tả hoạt động của công ty bạn].
Te hamandrika fivoriana miaraka amin’ny tompon’andraikitra aho [người quản lý, bộ phận tiếp thị…] hiresaka momba ny [các chủ đề].
Afaka mandamina fotoam-pivoriana aho mba handaminana fotoana amin’ny fotoana mety aminao. Na izany aza, tena feno fankasitrahana aho raha afaka mandamina an’io fotoana io ianao [thời gian A] SY [thời gian B] mba hanomanana tsara kokoa / tsara kokoa. Vonona hatrany aho hamaly amin’ny alalan’ny [số điện thoại của tôi] Raha manana fanontaniana ny tompon’andraikitra amin’ny ankilanao.
Misaotra anao naka fotoana ho ahy. Tsy andriko ny hihaino ny orinasanao.
Ity ambony ity dia maodely amin’ny fanasana fivoriana, fanasana izay fampiasa matetika ary mety amin’ny vondrona maro, ankoatra izany, azonao atao ny mitsidika ny tranokala 123job.vn mba hikaroka sy hisintona modely fanasana tsara tarehy kokoa, môdely. fanasana fivorian’ny ray aman-dreny. Ny mpampiasa dia afaka manova na manampy votoaty mifanaraka amin’ny lohateniny voatendry sy ny fitsipiky ny orinasa. Antenaina fa ny fampahalalana vao nozarainay etsy ambony dia nanampy anao hisintona sy hanoratra ny maodely fanasana fivoriana mahazatra indrindra!